भारतका विरुद्ध अभिब्यक्ति दिएर आफ्नो मातृभूमि आएकी मनिषा कोइरालाले अहिले के गर्दैछिन् ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
भारतका विरुद्ध अभिब्यक्ति दिएर आफ्नो मातृभूमि आएकी मनिषा कोइरालाले अहिले के गर्दैछिन् ?
काठमाडौ । नेपाली चेली मनिषा कोइराला यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले बलिउड जस्तो संसारकै ठूलो उद्योगमा गएर एक समय हंगामा नै गरिन् । शाहरुख, सलमान, आमिरजस्ता स्टारहरुसँग उत्तिकै उचाई कायम गर्न सफल यि सुन्दरी अभिनेत्रीको वनारसमा हुर्किएकी हुन् । उनी विपि कोइरालाको श्रीमति सुशिला कोइरालकोे काखमा हुर्किएकी हुन् ।
सुशिला फिल्म क्षेत्रको निकै सौखिम थिइन् । अभिनयमा लागेको भएता पनि राजनीतिमा पनि उत्तिकै जानकार यि अभिनेत्री भन्छिन् राजनीतिक दलभन्दा ठूलो मुलुक हो । त्यसैले जुनसुकै पार्टीले राम्रो काम गर्छ आफ्नो सहयोग रहने बताएकी छन् । उनले आफ्नो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमी जे भएपनि आफु भने तटस्थ रहेको बताएकी छन् ।
कालापानी लिपुलेक र लिम्पीयाधुराका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रतिकृया पछि उत्पन्न परिस्थितीमा आफु कसरी मुम्बईवाट काठमाडौ आइपुगे भन्ने कुरा पनि उनले सुनाएकी छन् । उनले त्यतीबेला भारतीय मिडियाले आफुलाई गरेको प्र हा र का कारण निकै दुखी भएको पनि बताएकी छन् । मनिषासँग पत्रकार जिवराम भण्डारीले गरेको कुराकानी हेर्नुहोस् भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै